कोरोना रोकथामका लागि जनसमुदायलाई सचेत रहन आग्रह
प्रकासित मिति : १७ चैत्र २०७६, सोमबार प्रकासित समय : ०७:५३
आज विश्व जगत कोरोना भाइरसको महामारीको आहातमा डुवेको छ । कोरोनाको कहर, विपतमा विश्व चिन्तित छ । विश्वका अति शक्तीशालाी राष्ट जहाँ स्वास्थ्य सुविधाको हिसावमा अति सम्पन्नशाली अमेरिका, चीन, वेलायत, स्पेन, इटली जस्ता देशमा कोरोनाको महामारी भुसमा लागेको आगोझै दिनप्रतिदिन संक्रमित हुने र मर्नेको संख्यामा मानवीय क्षति व्यहोरिरहेको छ । विश्वसमुदाय कोरोनाबाट भयभित, त्रसित भएर पीडामा रुमल्लिरहेकोछ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले ठूलो मानविय क्षति व्यहोरिरहेको अबस्थामा चिकित्साशास्त्र र विश्वस्वास्थ्य संगठन चिन्तित छ ।
यस्तो परिस्थितिमा हामीले धैर्य, संयम र सतर्क हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन जो जहाँ छ त्यहि घरभित्र सुरक्षित बस्ने, बाहिर ननिस्कीने, भीडभाडमा नजाने नियमको पालना गरौं । आज सुरक्षित रहे । भोली तपाई हाम्रो अवश्य भेट हुनेछ । हामीबाट टाढा रहेका आफन्तसंग निश्चय नैं भेट हुनेछ र हाम्रा अपुरा काम पुरा हुनेछन । हामीबाँच्यौं भने धन, सम्पत्ति कमाउँला, समुदायका लागि केहि गरौंला र सन्तानका सुन्दर सपना पुरा गरौंला ।
त्यसैले आज तपाई हामी सुरक्षित रहौं । तपाई हामी सुरक्षित भएर घर, परिवार र समुदायलाई सुरक्षित राख्न तपाई हामी सेल्फ क्वारेन्टाइन आफु र अरुलाई सुरक्षित हुनेमा लागौं । अब हामीलाई समय छैन । सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्बद्ध निकायले के गरे र के गर्दैछन त्यो समिक्षाको विषय रहला । आज विरोध नगरि हामी प्रत्येकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर सरकार, राज्य र नेपाललाई टेवा पुग्ने काममा योगदान पुर्यायौं । यहाँलाई आज यो कोरोना भाइरस के हो ? कहाँबाट आयो ? के हुन्छ ? कहाँ कति असर गर्यो ? यो रोग लाग्न र फैलिन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
चीनको बुहानमा शुरु भएको कोरोना भाइरस नेपालसम्म कसरी आइ पुग्यो यो बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं।
दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बड्दो छ । पछिल्लो समय यो भाइरस सबैभन्दा बढी इटाली, स्पेन र अमेरिकामा फैलिएको छ । यसले अमेरिका र अन्य युरोपेली मुलुक समेतलाई आफ्नो शिकार बनाएको छ । हाम्रा छिमेकी सार्क राष्टमा पनि यो फैलिसकेको छ । नेपालमा पनि ४ जनामा यसको संक्रमण देखिएको छ । ती मध्ये २ जनालाई उपचारपछि निको भएको छ । अब सुन्नुहोस यो भाइरस कसरी फैलियो ।
पहिलो चीनको घटना: ३ महिना अघि सन २०१९ को डिसेम्बर १० को मध्यान्हमा वुहान शहरको ५७ बर्षिया माछा व्यापारी महिला मिकु जियान खोकी र ज्वरोले सताएपछि अस्पताल जान्छिन । अस्पतालले रुघाखोकी र ज्वरोको औषधी दिन्छ । उनी आफ्नै पसलमा फकिन्छिन । तर त्यसको ८ दिनपछि अर्थात १८ डिसेम्वर २०१९ को साँझ उनी बेहोस भएर पसिलमैं ढल्छिन । घटना भएको दुई हप्तासम्म पनि मिकु जियानलाई लागेको रोगको बारेमा केही पत्ता लगाउन सकिएको हुँदैन । बरु थप ४० जनामा त्यहि प्रकारको लक्षण र समस्या देखा परिसकेको हुन्छ । तत्पश्चात चीनको वुहानले यो अज्ञात रोगको विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लाई जानकारी गर्छ । ७ जनवरी २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले यसलाई नयाँ रोग भएको घोषणा गर्दै नाम दिन्छ ल्यख novel coronavairus 20 19अर्थात काभिड १९
दोस्रो ईटलीको घटना: ३१ जनवरी २०२० रोम, इटलीको त्यो विहानी, चीनको बुहानबाट घुम्न आएका दुई चाइनिज पर्यटकलाई चेकजाँचमा पहिलो पटक काभिड १९ पोजेटिभ देखिन्छ । इटलीको लागि यो पहिलो केस थियो । त्यसको ठीक एक हप्तापछि बुहानबाटै फर्केका एक इटालियनमा पनि काभिड १९ पोजेटिभ देखिन्छ । आजको स्थिति इटालीमा के छ यहाँले सुनिराख्नु भएको छ ।
तेस्रो भारतको घटना: १ मार्च २०२० मा दुवइबाट मुम्बई आएका ५ जना भारतीय नागरिकहरुमाकाभिड १९ पोजेटिभ देखिन्छ । भारतका लागि यो पहिलो केस थियो ।
चौथो नेपालको घटना: २४ जनवरी २०२० मा कोरियाबाट आएका एक नागरिकमा काभिड १९ पोजेटिभ देखिन्छ । उनलाई निको हुन्छ । यो नेपालका लागि पहिलो केस थियो । पुनः २३ मार्च २०२० मा फ्रान्सबाट आएका १९ बर्षे एक महिला विद्यार्थीमा पुनः काभिड १९ पोजेटिभ देखिन्छ ।
उल्लेखित देशको यथार्थ:
नेपाल बाहेक माथिका तीनवटै देश हरेक दृश्टिकोणले सम्पन्न, सक्षम र शक्तीशाली छन । स्वास्थ्य क्षेत्रको दृश्टिकोणले मुल्यांकन गर्दा चीन र भारत एशियाकै सक्षम देशमा पर्दछन । इटली त युरोपकै उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था भएको देश मानिन्छ ।
काभिड १९ का चरण:
काभिड १९ लाई फैलाईको आधारमा चार चरणमा वर्गिकरण गरिएको छ ।
(१) पहिलो चरण: विदेशबाट आएका हरुमा मात्र काभिड १९ देखिने चरण
(२) दोस्रो चरण: विदेशबाट आएकाहरुको आफन्त वा उनीहरुको सम्पर्कमा भएकाहरुमा मात्र काभिड १९ देखिने चरण
(३) तेस्रो चरणः कहि.कतै नगएका र विदेशबाट आएकाहरुको सम्पर्कमा पनि नरहेकाहरुलाई काभिड १९ देखिने चरण
(४) चौथो चरण: महामारीको रुपमा देशभरि जताततै देखिने चरण
चीन करिव करिव कोरोना मुक्त हुने अबस्थामा छ । इटली चौथो चरणमा गुज्रीरहेको छ । भने भारत तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
(१) चीन: भाइरस नयाँ भएको कारण चीनलाई भाइरसको बारेमा थाहा पाउनै करिव तीन साता लाग्यो । त्यतिन्जेल यसले तेस्रो चरण पार गरिसकेको थियो ।
(२) इटली: भाइरसको बारेमा इटलीलाई पुरा जानकारी थियो । एशियामा फैलिएको हो हामी युरोपमा छौं भन्ने नैं इटलीको भ्रम रह्यो । आम नागरिकले सजगता र सरकारी निर्देशनको सहि पालना गरेनन । फलतः पहिलो चरणमैं कोरोना रोक्ने क्षमता भएको इटली वेवास्ता र हेलचक्रयाईंको कारण एकाएक चौथो चरणमा पुग्नु पर्यो ।
(३) भारत: काभिड १९ भाइरसको विषयमा भारतलाई सबै जानकारी भैसकेको थियो । भारत रोकथामका लागि प्रयासरत पनि छ । तर इटलीका जनताले झैं भारतीय जनताको अटेरिपन र हेलचक्रयाईको कारण भारत तेस्रो चरणमा पुगेको छ ।
(४) नेपाल ः भाइरसको विषयमा जानकारी छ । सजगता, पूर्व तयारी र सरकारको आदेश पालन गर्ने हो भने पहिलो चरणमैं कोरोनालाई रोक्न सकिन्छ ।
हाल विश्वका १९५ भन्दा बढी देशमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ । हालसम्म विश्वका ६ लाख ६८ हजार २ सय ९५ संक्रमित भई ३१ हजार १९ जनाकोे मृत्यु भैसकेको छ । भने १ लाख ४२ हजार ७ सय ८५ जनालाई उपचारपछि निको भएकोछ ।
विश्वका देशहरुमा देखिएको कोरोनाको स्थिति तपसिल बमोजिम रहेकोछ । यो क्रम दैनिक बढ्दो अबस्थामा छ ।
देशको नाम संक्रमित मृत्यु
१. इटली ९२४७२ १०,०३४
२.स्पेन ७३२३५ ५९८२
३.चीन ८१४३९ ३३००
४.अमेरिका १,२३,७८० २२२९
५.इरान ३५,४०८ २५१७
६. दक्षिण कोरिया ९५८३ १५२
७.वेलायत १७०८९ १०१९
८.भारत ९८७ २५
९.नेपाल ५ १ लाई सन्चो
चौथो चरण भएर गुज्रीएकोे चीन र इटलीको काभिड १९ ल्याएको अवस्था बर्णन नैं गर्न नसकिने खालको छ । अर्थात भयावह छ । त्यो तपाईं हामीले सोचे भन्दा १०० गुणा भयानक छ । चीन हुँदै इटलीमा फैलिएको कोरोना दिनप्रतिदिन भुसमा सल्केको आगो झैं अमेरिका, स्पने वेलायत, दक्षिण कोरिया, इरान, भारत, पाकिस्तान र नेपाल हुँदै विश्वका १९० भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ ।
यसको समिक्षा गर्दा: चौथो चरण त धेरै परको हो । हामी नेपाली र नेपाललाई दोस्रो र तेस्रो चरणसंग भिड्न समेत धेरै नैं गाह्रो हुनेछ । त्यसैले हामीले काभिड १९ लाई पहिलो चरणमैं पराजित गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । हामीले सामाजिक दुरी कायम गर्न सक्यौं भने यो सोचे भन्दा सजिलो पनि छ ।
अब हामीले के गर्ने:
हामी नेपाली हिन्दुवादी धर्म, सँस्कृति र धार्मिक आस्थामा बाँधिएका छौं । कुनै विपत आएमा देवीदेवतालाई सम्झिन्छौं । धितोवाँदो उठाउँछौं । मनशान्ति गर्छौ । यसले विश्वास, आस्था र धैर्यता सृजना जागृत गर्छ । विश्वका कयौं शक्तीशाली राष्टले नसकेको कुरा धामीझाक्री र अन्धविश्वासमा पनि हामी नपरौं , पछिल्लो उदाहरण शनिवार १४ गतेको विहान बाजुरा लगायत सुदूर तथा मध्यपश्चिममा देवताको भविश्यवाणीले घरको ढोकामा तिलक पाएर निधारमा लगाएर कोरोना नलाग्ने हल्ला, अफवाह र भ्रमले बजार ततायो । एक दुई जना जम्मा हुन नपाउँने घरभित्र सुरक्षित बस्ने सरकारको निर्णय विपरित हामी १५, २० जना संगै भयर तिलक खोज्न लाग्यौं । त्यो खोज्ने क्रममा पाएको भनि अरुलाई लगाउन गयौं । कोही संक्रमित छ भने त्यहाँ उपस्थित सबैलाई सर्न सक्छ ।
त्यो भ्रम हो की यथार्थ हो त्यसका पछाडि नलागौं । भनेको र भएको सत्य भएपनि एक्लै खोज्न पाइन्छ तर भीडभाड गरेर सानो कुरालाई बस्तीमा गयर मान्छे जम्मा गरि थपेर भ्रम नफैलाउँन पाईदैन । १५, २० जनाको घरमा त्यो सरुवा रोग गएमा घरका सबैलाई सर्छ । अनी घर, गाउँ, टोल, बस्ती नैं रोगले संक्रमित भएर सखाप हुने स्थिति हुन सक्छ । गाउँ घरमा एकै घरमा जम्मा भएर बस्ने, टीभी हेर्ने, बुढापाका र महिलाहरु संगै बसेर तमाखु खाने, सुखदुख गर्ने, युवाहरु संगै बसेर जाँडरक्सी खाने रमाउने, चारपाँच जना तास खेल्ने अनि ५, १० जना हेर्ने, फुटवल, भलिवल खेल्ने यो उपयुक्त समय होइन।
एकमा यदि यो रोग संक्रमण भएको छ भने सजिलै अरुमा सरेर तपाइृंले घर, परिवार र समाजमा कुनाँसो बाँडेर बस्ती जोखिममा पार्नु हुनेछ । देवता हेराउने र पुज्ने यो समय होइन । हाम्रा आस्था र विश्वासका धरोहर मान्यवर देवीदेवतालाई सम्झियौं । धितोवाँदो, भेटी उठाएर राखौं । यो समस्या समाधान भएमा देवता हेराउँला, पाठोपर्गलो गरौंला अहिले घरघरमा भाकल राखोैं । आस्था नमेटौं पुकार गरिराखौं तर सचेत हौं । नजिकिदै गरेको चैते दशैं पनि सामान्य रुपमा मनाऔं । खसी, बोका, कुखुरा काटेर मोजमस्ती गर्नेमा नलागौं ।
संकटकालमा जीउ जोगाउनु अनिकालमा विउ जोगाउनु भन्ने उखान त हाम्रो पुर्खाले सिकाएकै छ । हामी नेपाली र हाम्रो खोलादरामा विभिन्न संकट आए हाम्रा पुर्खा र हामीले पार गरिसकेका छौं । २०२२ सालको भोकमरी, दरवार हत्याकाण्ड, विभिन्न पर्व, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका संघर्ष, १० बर्षे जनयुद्ध, हैजामहामारी, १९९० र २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्प, ठूलाठूला दैवी प्रकोप, बाढीपहिरो आदिको सामना गरेको इतिहास हामी सामु छ र हालसालको कोरोना अहिले विश्व समुदायको अगाडी महामारी महाकाल बनेर तपाई हाम्रो घरमा टाउको अगाडी कोरोना भाइरस घुमिरहेको छ । हाम्रो घरमा मरेको कुकुर र पशुचौपायालाई त राम्रोसंग गाडेर सदगद गछौं । यो रोगले मृत्यु भएमा रुने, फाल्ने र मलामी जाने पाइने छैनन् ।
यसलाई परास्त गर्न घरमैं बसौं, अनुशासित बनौं, सुरक्षित बसौं। त्रसित नबनौं, संयमित रहौं । संक्रमण फैलिन रोकौं । भ्रम, अफवाहबाट मुक्त हौं । हामी सावधान बनौं तर आतंकित नहौं । हल्ला र भ्रमबाट सामान्य विरामी, बृद्धा, सुत्केरी, सुस्तमनस्थिती भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई असर र प्रभाव पर्न सक्छ । सामान्य विरामी र कमजोर आत्मा भएको मानिस बेहोस भएर मर्न सक्छ । त्यसैले सहि सूचना, सत्यतथ्य कुरा मात्र गर्ने गरौं ।
अब यो लकडाउन भनेको नसुनेको शब्द के हो यो भन्ने यहाँलाई हुन सक्छ । घरभित्रै सुरक्षित भएर बस्ने अरु कहाँ पनि नजाने अरुलाई आफ्नो घरभित्र आउन नदिने एक दम सुरक्षित बस्ने हो । अर्को अर्थमा यसको उल्लंघन गरेमा घर भन्दा बाहि आएमा लठ्ठीले कण्डामा डाम उठ्ने गरि नखाने हो । कोरोना भाइरसले विश्वलाई आहात, काहेल बनाएको अवस्थामा हामी नेपालीले आफ्नै अर्थ लगाउनु छ । त्यो हो कोलाहल र भीडभाडबाट टाढै रहने, रोकथामको लागि मास्क लगाउने, नाकमुख छोपेर मात्रै खोक्ने, हाच्छयुँ गर्ने, भाइचारा स्वरुप हात मिलाउनु भन्दा नमस्कार गर्ने, इम्युनिटी पावर कम भएको व्यक्तीको राम्रो हेरचाह गर्ने, शक्ती दिने खाना खाने, राम्रोसंग पाकेको वा पकाएर खाना खाने, संक्रमणको शंका र लक्षण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा चेकजाँच गराउन जाने अथ्र्याइएको छ । कोरोनालाई छोटो अर्थमा कोही पनि रोडमा नाजाने भन्ने पनि अर्थ हो ।
यो चिकित्साशास्त्रको अर्थ होइन तर कोरोना भाइरस परास्त गर्न यी उपाय अपनाउँदा परास्त गरिने हुनाले यसको अर्थ जनचेतनाका हिसावले लगाईएको हो । सरकार थप एक हप्ता लकडाउन लाई एक हप्ता लम्व्याएको छ । यो बन्द कुनै राजनीतिक दल र अन्य मागका लागि गरेको नसम्झिनु होस । हामी सबै नेपाली र नेपालका लागि भयावह स्थिति नआओस भनेर तपाई हामी सबैको ज्यान संरक्षणको लागि गरिएको हो भन्ने बुझ्नु होस । यो रोग शहरमा मात्र हुन्छ गाउँमा खुला छ भन्ने भ्रम हो रोगले सानो। ठूलो, गाउँ शहर भन्दैन । धनगढीसम्म पुष्टि भैसकेको छ । हाम्रा तमाम व्यक्ती विदेश, देश, शहरबाट आए होलान संक्रमित व्यक्तिसंगै गाडी, होटल, हवाई जहाज प्रयोग भएको भए नआउला भन्न सकिन्छ र ? त्यस्तो शंकास्पद र लक्षण देखिएको व्यक्ति भएमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गरेर उपचार गर्न सहयोग गर्नुहोस ।
सरकारले गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्नुहोस । घरपरिवारका सदस्यसंग सुखदुख गर्नुहोस । घरमा बनाएको खाना खानुहोस । हाँशीखुशी बस्नु होस । बाहिर नजानु होस । आफ्नो आमाबुबा, बालबच्चा, भाई, दिदीबहिनी, श्रीमतिसंग रमानु होस । माया गर्नु होस , पारिवारिक योजना बनाउनु होस । अपुरा सृजना, लेखन र योजनाका काम छन भने सकिने पुरा गर्नु होस ।
हाम्रो राष्टियगानमा गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ भनेझैं अव तपाई हामी सबैले गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीबाट कोरोना भाइरस परास्त गर्न एक घर र एक गाउँबाट अर्को ठाउँ नगएर सरकारले लगाएको लकडाउनलाई असल नेपाली भएर पालना गर्नु हो । सरकारले थप एक हप्ता यसलाई बढाएको छ । तपाई हामी सबैले विश्वका शक्तीशाली राष्टले कोरोना भाइरस महामारीको अगाडी घुडा टेकेको अवस्थामा घरभित्रैबाट नेपाल आमा, नेपाली दाजुभाई र तमाम हामी गाउँबस्ती जोगाउने अभियानमा साथ, सहयोग र समर्थन गरि असल नागरिकको पहिचान नेपालबाट सन्देश दिउँ ।
काभिड १९ कोरोना भाइरसलाई तपाई हाम्रो समुदायबट परास्त गर्न यी उपाय अनिवार्य रुपमा अपनाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
लकडाउन (घरबाट बाहिर ननिस्कीने) अरुको सम्पर्कमा नजाने
कफ्र्युको पालना गर्ने
बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धोईरहने
मास्कको प्रयोग गर्ने
सहि सूचना लिने र दिने
भीड र हुलबाट टाढा रहने
खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा मुख छोप्ने
कसैसंग भेट गर्नै परेमा दुरी कायम गरि टाढैबाट भलाकुसारी गर्ने
यस्तो बेलामा अरुका घर नजाने र अरुलाई नआउन अनुरोध गर्ने
काभिड १९ लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेकजाँच गर्ने ।
तपाई हामी प्रत्येकले यो कठिन घडीको सामना गर्न यी तपसिलका उपायहरु अपनाउन अति जरुरी छ ।
म तपाईंलाई माया गर्छु तर
म संग कतै भेट भएमा मलाई नछुनु होला ।
म संग जम्काभेट हुँदा हात नमिलाउनु होला ।
म संग भेटघाट हुँदा दूरी राखेर मात्र बोल्नु होला ।
मलाई भेट्न नआउनु होला ।
मलाई खानपिनमा नबोलाउनु होला ।
मलाई कसैले ढोग्दा मेरो खुट्टा नछुनु होला ।
मलाई आशिष दिंदा शीरमा हात नराख्नु होला ।
मलाई सानातिना समस्याहरुमा नबोलाउनु होला ।
मलाई खुशीका अवसरहरुमा निम्तो नदिनु होला ।
किनकी कोरोना छ किनकी म तपाइलाई माया गर्छु
किनकी म यो महामारी विरुद्धको लडाईमा छु किनकी म स्वच्छिक एकान्तबासमा छु । भन्ने यी उपाय अपनाउनु होस ।
अन्तमा छोराको अग्नी परिक्षा विवाहपछि हुन्छ, छोरीको परिक्षा जवानीमा हुन्छ, पतिको परिक्षा श्रीमति विरामी भएको वेला हुनछ, पत्नीको परिक्षा पति गरिव भएको वेला हुन्छ, मित्रको परिक्षा अप्ठ्यारो पर्दा हुन्छ, भाईको परिक्षा दुश्मनले घेराभित्र पार्दा हुन्छ, दीदीबहिनीको परिक्षा जायजेथा सकिएपछि हुन्छ, सन्तानको परिक्षा बुढेसकालमा हुन्छ, बुहारीको परिक्षा छोरा विदेश हुँदा हुन्छ, वकिलको परिक्षा आफुलाई मुद्या पर्दा हुन्छ, राजनेताकोे अग्नी परिक्षा देश अन्योलता परेपछि हुन्छ, युद्धमा सैनिकको अग्नी परिक्षा हुन्छ, अज्ञानतामा गुरुको अग्नी परिक्षा हुन्छ भने महामारीमा वैद्यरत्नको अग्नी परिक्षा हुन्छ ।
नेता र जनप्रतिनिधीको परिक्षा जनता संकट र समाज संकटमा पर्दा हुन्छ भने जनताको परिक्षा देश संकट पर्दा हुन्छ । आज देश संकटमा परेको वेला जनताको अग्नी परिक्षा आएको छ । यो अग्नी परिक्षाको घडी पार गर्न जनता, वैद्यरत्न(स्वास्थ्यकर्मि), राजनेता र जनप्रतिनिधीको हातमा छ । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौं । कोरोनासंग जो डर्छ उ मर्छ, जसले हेप्यो उसलाई चेप्यो जो सजक रह्यो उ बाँच्यो । तसर्थ सजगता अपनाउँ आफु र अरुको जीवन जोगाउँ ।
अध्यक्ष एवं सामुदायिक रेडियो बुढीनन्दा ९६.५ मेगाहार्ज, कोल्टी, बाजुरा जनहितमा जारी सन्देश । धन्यवाद ।